vendredi, 06 avril 2018 19:26
SIM: Salon de l'Industrie de Madagascar andiany faha efatra
Ho tanterahina eny amin'ny Forello-Expo Tanjombato, ny 21-24 jona 2018, indray ny andiany faha efatra amin'ny Salon de l'Industrie de Madagascar na ny SIM. Izany dia tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny faha 60 taonan'ny SIM ihany koa, ka ny teny ho entina amin'izany dia ny hoe: Malagasy ny Antsika.
vendredi, 06 avril 2018 18:51
Antsirabe: Mampiantrano atrikasam-pirenena momba ny fananantany
Nontontosaina nanomboka omaly alakamisy 05 avrily teto Antsirabe ary haharitra hadimiana, ka tsy hifarana raha tsy ny alahady ho avy izao, ny atrikasam-pirenena iraisan'ireo mpiasan'ny fananantany sy ny fandrefesantany manerana an'i Madagasikara.
Efa hatramin'ny taona 2005 no nisian'ny fanavaozana ny fananantany teto Madagasikara ary nitohy izany ary efa eo am-pamaranana amin’izao.
vendredi, 06 avril 2018 18:33
Mahajanga: Fankalazana ny Andron'ny Zandarimaria an-tsary
Mahajanga: Fankalazana ny Andron'ny Zandarimaria an-tsary.
vendredi, 06 avril 2018 18:20
Dr Jules Etienne: Kandida mety hanova ny tombatombana
Nanambara ny firotsahan-kofidiany ho kandida filoham-pirenena omaly ny filoha nasionalin’ny antoko MAdagasikara FIvoarana (MAFI), ny Dr Rolland Jules Etienne.
Tamin’ny taona 2007 no niatombohany nanao politika. Minisitry ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina tao anatin’ny governemanta Kolo Roger izy.
Filohan’ny Antenimierandoholona voalohany tamin’ny Repoblika Voalohany ny rahalahin-drainy, Jules Ravony. Praiminisitry ny Repoblika faha-III tapany fahatelo ny rahalahiny, Francisque Ravony.
vendredi, 06 avril 2018 18:19
Antalaha: Rangahy 50 taona voarohirohy ho nanambady omby
Voatazona vonjimaika ao amin’ny Commissariat de Police Antalaha ity Raim-pianakaviana ity izay nisy nitory fa hoe : “isaky ny mamo ity rangahy ity dia misôma ratsy amin’ny omby midekadeka”.
Efa nohenoina moa ilay voatory ary mitsipaka izany, ka milaza fa “io fotoriana mikasika zaho io dia tsy marina fa ireo ihany no nitory zaho ho efa nanamby ombin’izy ireo in-telo”.
Aorian’ny famotorana ataon’ny Polisim-pirenena azy moa dia hatolotra ny Fitsarana ambaratonga voalohany eto Antalaha izy. Ny anton’ny fitoriana dia hoe : « acte impudique ou contre nature ».
vendredi, 06 avril 2018 10:13
Amparibe : Christine Razanamahasoa délogée manu militari
La Députée d’Ambatofinandrahana et coordonnatrice nationale du groupe politique MAPAR est délogée manu militari
de son domicile à Amparibe, dans le 1er Arrondissement Antananarivo, tôt ce matin. L'ancienne ministre de la Justice et garde des Sceaux, sous la Transition est encore en peignoir quand les émissaires du Fanjakana accompagnés par des éléments de l’Emmo-Reg ont débarqués vers 6h du matin, et ont sorti les biens et matériels de la député dans la cour et mis sur le trottoir.
D’après une source, Christine Razanamahasoa n’a plus le droit d’occuper ce logement administratif qu'elle a occupé depuis qu'elle est ministre de la justice, d’où cette expulsion. L’élue se défend ne pas avoir reçu aucune notification à fins d'expulsion alors que c’est obligatoire.
vendredi, 06 avril 2018 09:58
Tomboarivo-Antsirabe: Lasan’ny jiolahy ny fitaovana marobe sy vola 9 tapitrisa Ariary
Notafihin’ny jiolahy ny “villa” iray tao amin’ny fokontany Tomboarivo-Antsirabe ny alarobia 04 avrily 2018 tamin’ny 10 ora alina. Toa efa nandrasan’ireo jiolahy mitam-basy ny fahatongavan’ireo tompontrano, izay mpivady ihany.
Ny vola avy hatrany no notadiavin’ireo jiolahy. Nofatoran’izy ireo ilay raim-pianakaviana. Nosavain’ireo avokoa ny tao an-trano ka nahitan’izy ireo ny vola 9 tapitrisa Ariary, noteren’izy ireo hanoro ny vola. Noraofin’izy ireo avokoa ny fitaovana maromaro toy ny vata fahitalavitra, ordinatera fitondra mandeha, finday, sns.
vendredi, 06 avril 2018 09:57
Marovoay: Fiara miisa 72 nogiazana ny taratasiny
Resaka patanty no voalaza fa nisintonan’ny mpitandro ny filaminana mandrindra ny fifamoivoizana ny taratasin’ireo fiara ireo, ary tsy maintsy handoavana lamandy toy ny “fourrière”, izay 6.000 Ariary/cheval vao azo ny taratasy. Nanomboka ny 3 aprily 2018 dia efa 72 ireo fiara voasintona taratasy ary saika fiara mpitatitra avokoa ireo ; ny fiara iray amin’ireo anefa dia manana tanjaka 10ch ny kely indrindra.
Misy taratasy avy any amin’ny Fitantanana ankapobeny ny hetra anefa milaza fa dia manana hatramin’ny 15 mey 2018 ny mpandraharaha handoavana ireo hetra tambatra sy ny hetra amin’ny vola miditra, saingy tsy voahaja izany.
Velon-taraina ireo mpandraharaha manao asa fitaterana eto Marovoay Faritra Boeny, manoloana izany, ary miantso ny Bianco hijery akaiky sy hanokatra fanadihadiana ny anton’izao toe-javatra izao.
vendredi, 06 avril 2018 08:50
Sambava: Fiara nitondra ny Zanak’i Masina Maria niharan-doza ka nisy maty tsy tra-drano
Omaly alakamisy 5 aprily tamin’ny telo ora tolak’andro no nitranga ny loza, ka fiara minibus roa no nifandona raha hiditra ny tanànan’Ambohimalaza.
Nitondra mpino Katolika avy amin’ny fikambanana Zanak’i Masina Maria (ZMM), handeha any amin’ny vohitra Andohan’Antsahabe ny fiara iray. ZMM iray avy amin’ny Inspection Ambohitrosy no namoy ny ainy, maty tsy tra-drano tamin’ity loza ity, maro ireo naratra.